कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग प्रधानमन्त्रीको अर्थपूर्ण भेट, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई चिन्तित पाएँ’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
उहाँको स्वकीय सचिवले एसएमएस गर्नुभएको थियो । म त जिल्लामा थिएँ, बुधबार साँझ मात्र फर्किएको हुँ । काठमाडौँ पुगेपछि फोनमा संवाद भयो र बिहीबार बिहान साढे ८ बजे उहाँलाई भेट्न बालुवाटार गएको हुँ । हामीबीच करिब दुई घन्टा संवाद भयो ।
उहाँको मुख्य सन्देश के थियो ?
उहाँलाई अलि बढी चिन्तित पाएँ, खासगरी स्थिरताको विषयमा । हुन पनि हाम्रो देशमा दुईतिहाइ बहुमत लिएर बिपी कोइरालाको सरकार बन्दा पनि राजनीति स्थिर भएन । ०४८ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बलियो सरकार पनि ढल्यो । अहिले पनि दुईतिहाइ सरकार छ, तर अस्थिरताको आशंका छ । यही परिवेशमा उहाँले मलाई बोलाउनुभएको हो । धेरै विषय उहाँले नै बोल्नुभयो, पृष्ठभूमि पनि खोल्नुभयो । खासगरी ०६२/६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा बसेको प्रसंग ल्याउनुभयो । उहाँको भनाइ थियो– सुरुमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई मनपराउनु हुन्नथ्यो, तर पछि यो काम गर्न सक्ने मान्छे हो भन्ने विश्वास भएपछि छलफल गर्न थाल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालासँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । तर, संविधान जारी भएपछि उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेपछि सम्बन्धमा तिक्तता आयो ।
उहाँले तपाईंहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ?
त्यो त स्वाभाविक होजस्तो लाग्छ मलाई । तर, मसँग मात्र कुरा गरेर के गर्ने, तपाईंले पार्टी सभापति (शेरबहादुर देउवा)जीलाई पनि भेट्नुस्, कुरा गर्नुस् भनेँ । उहाँले ‘भेटेको छु, अस्ति पनि भेटेँ । तर, म मात्र होइन, हाम्रै सचिवालयका साथीहरूले पनि भेटेका छन् । सूचना त मसम्म पनि आइपुग्छ नि’ भन्नुभयो ।
तपाईंहरूबाट अपेक्षित सहयोग के हुन सक्छ ?
हामीले सहयोग गर्ने त्यस्तो ठाउँ के छ र ? हामीले असहयोग पनि केही गरेका छैनौँ । जे समस्या छ, त्यो उहाँको पार्टीभित्रको हो । राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनयन गर्ने विषयमा उहाँहरूबीच समस्या देखियो । तर, समस्या त्यसअघिदेखि नै छ, खासगरी एमसिसीको विषयदेखि नै । समग्रमा मैले उहाँलाई चिन्तित पाएँ । उहाँले अहिले असहज छ, तर मसँग स्ट्रेन्थ छ भन्नुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस राजपा–समाजवादी एकता : ‘टप टेन’ नेता नै समस्या
त्यो स्ट्रेन्थ भनेको के होला ?
उहाँले खुलस्त भन्नुभएन ।
उहाँको चिन्ता खास के विषयमा थियो ?
त्यो त तपाईंहरूले लेखिरहनुभएको छ नि । मिडियामा आइरहेको छ नि । ती विवाद छन् भनेर उहाँले पुष्टि गर्नुभयो । खासगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र भएको विवादको प्रसंग उहाँले उठाउनुभयो । त्यसमा तपाईंको धारणा के छ भनेर उहाँले मलाई सोध्नुभएको थियो । मैले भनेँ– कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो भनाइ केही छैन । सरकारले सिफारिस गर्ने हो, राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने हो । तर, कुनै व्यक्तिका नाममा संविधान चलाउन पाइँदैन । त्यसले विकृति–विसंगति ल्याउँछ, जसलाई हामीले थाम्नै सक्दैनौँ । त्यसैले त्यो बाटोमा नलागौँ । तर, त्यो कुरा हाम्रा साथीहरूले बुझेनन् भन्नुभयो ।
वामदेव गौतम र युवराज खतिवडाको प्रसंग आयो कि आएन ?
आयो, कुरा भयो । युवराज खतिवडालाई व्यक्तिगत रूपमा त्यति धेरै चिन्दिनँ, तर उहाँ एउटा क्वालिफाइड मान्छे हो भनेर मैले भनेँ । विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि खतिवडाजीलाई विश्वास गरेको छ भनेर भनेँ ।
सरकारको आलोचना भइरहेको विषयमा केही कुरा भयो कि ?
उहाँ आफैंले बर्थडे केकको प्रसंग ल्याउनुभयो । खानेपानी, सडकको उद्घाटन र शिलान्यासमा गएको हुँ । त्यही दिन मेरो बर्थडे पनि परेको थियो । को–कोले केक ल्याए, काटे भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले भनेँ– केक काट्नु तपाईंको निजी विषय हो, यसमा मेरो खास भनाइ केही छैन ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरणबारे छलफल भएन ?
भयो । गोकुलजीको टेप प्रकरण होस् अथवा अख्तियारले छानी–छानी मुद्दा लगाएको विषय । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भनेर मैले भनेँ । नैतिकताका आधारमा तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु भनेर स्मरण पनि गराएँ ।
उहाँले के भन्नुभयो ?
हाँस्नुभयो । तपाईं त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, यो त तपाईंको धर्म नै हो भन्नुभयो । तर, गोकुलजीले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन भन्ने उहाँको आशय थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस पेचिलो बन्दै सामाजिक सुरक्षा
१६,फाल्गुन.२०७६,शुक्रबार ०७:२४ मा प्रकाशित
← पेट्रोलमा ८६% कर : पूर्वाधार कर पाँचबाट १० रुपैयाँ बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
पूर्वराज्यमन्त्री साह भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर , चार वर्ष कैद र १९ करोड जरिवाना →